Ukwehlisa ubuchwepheshe-Izindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Isikhathi: 2020-07-10 Amazwana: 25
Ukubilisa kukhishwa kukabhiya ngokunyusa umthombo wesitashi (imvamisa okusanhlamvu) emanzini bese ubilisa imvubelo. Iphothulwa endaweni yokuphisa utshwala ngumuntu ophisa utshwala, kanti ukuhweba ngotshwala kuyingxenye yeminotho eminingi yasentshonalanga. Ukwehliswa kwenzekile kusukela kwinkulungwane yesi-6th BC, futhi izinkomba zemivubukulo ziphakamisa ukuthi le ndlela isetshenziswe emiphakathini eminingi evelayo ehlanganisa iGibhithe neMesopotamia endala kakhulu. Inqubo yokuphisa: Kunezinyathelo ezithile endleleni yokwenza utshwala, engafaka phakathi i-malting, mashing, lautering, abilayo, ukuvutshelwa, ukufakwa kwesimo, ukuhlunga nokugoqwa. I-Malting iyindlela lapho okusanhlamvu kwebhali kwenziwa khona kulungele ukuphekwa. IMashing iguqula amastashi akhishwe kuso sonke isigaba sokumila abe ushukela ongavutshelwa.
Umphumela wendlela yokugaxa uketshezi olunothile ushukela noma i-wort, ebese icindezelwa phansi kwesisekelo se-mash tun ngendlela eyaziwa ngokuthi yi-lautering. I-wort ifakwa esitsheni esikhulu esaziwa ngokuthi "ithusi" noma iketela lapho lifakwa khona ngokugxuma futhi kwesinye isikhathi ezinye izinto ezinjengamakhambi noma ushukela. Lesi sigaba kulapho kwenzeka khona ukusabela okuningi kwamakhemikhali nokwenziwa kwemishini, futhi lapho kwenziwa khona izinguquko ezibalulekile mayelana nokunambitheka, umbala, nephunga likabhiya. Ngemuva kwe-whirlpool, i-wort bese iqala indlela yokubanda. Indlela yokubilisa iqala ngokwengeza imvubelo ku-wort, lapho ushukela uphenduka utshwala, i-carbon dioxide nezinye izinto.
Previous: Ubuciko beCraft buya ngokuthandwa eChina
Okulandelayo: Ngisho nama-nerds obhiya angafunda okuthile ohambweni lwebhasi le-Bitter Minnesota